Madaafiic khasaaro geesatay oo lagu weeraray Xarunta Xalane ee Muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaafiic khasaaro geesatay oo lagu weeraray Xarunta Xalane ee Muqdisho
Waxaa saakay tiro madaafiic ah lagu garaacay xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ah xarunta looga taliyo AMISOM sidoo kale ay degan yihiin Safiiro iyo Diblumaasiyiin reer Galbeed ah .
Madaafiicda lagu garaacay xarunta Xalane ayaa la sheegay in badankood ku dhaceen guryo dad shacab ah degan yihiin oo kuyaala degmada Wadajir, waxaana madaafiicdaasi lasoo tabinayaa in khasaaro nafeed ka dhasheen.
Dadka degan agagaarka Xarunta Xalane ayaana ka argagaxay madaafiicdan saakay kusoo dhacday xaafadaha ku dhaw dhaw Xalane, waxaana dadka qaar bilaabeen in ay guryahooda banaanka uga baxaan markii madaafiicda bilaabatay.
Xerada Xalane ee madaafiicda lagu garaacay waxaa maalmihii lasoo dhaafay degnaa madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo isku aamini waayay magaalada Muqdisho inteeda kale deegaana ka dhigtay gudaha Xalane.
Previous articleMaamulka Jubbaland oo war ka soo saaray Is dhiibada cabdirashiid Janaan ee dhanka Dowlada
Next articleFarmaajo oo subaxii hore ku soi dheelmaday Teendhada afisiyoone si uu u baahiyo kulanka 5 Maamul Goboleyd
Saraakiil ka tirsan Tababarayaasha mareykanka ee Ciidamada DANAB ee xoogga dalka Soomaliyeed ayaa waxaa ay db ugu soo laabteen Xerada Tababarada Ciidamada ee ku...
Waa kuma ninka guursaday Kim Yo-jong walaashiis?